सुधीर बस्नेतको अन्तर्वार्ता–‘म ठगिएको छु, जति थियो बैंकले लिलामी गरेर खायो’ | Diyopost
अर्बौं ठगीको आरोपमा घर जग्गा व्यावसायी सुधीर बस्नेत पटक पटक जेल पर्दै छुट्दै आइरहेका छन् । कुनै समय १७ देखि २० अर्ब सम्पत्ति रहेको दाबी गर्ने बस्नेत यतिबेला के गर्दैैछन् ? के बस्नेत वास्तवमै ठग हुन् ? तर, उनी आफूलाई ठग नभएको र आर्थिक दुर्घटनामा परेको बताउँछन् । उनै बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी विस्तारमा ।
तपाईं १० अर्ब ठगी गरेको अभियोगमा १८ महिना जेल बसेर आउनु भयो । तपाईं इतिहासको सबैभन्दा ठूलो ठग हो ?
– यो प्रश्नको जवाफ केही समय पश्चात इतिहासले नै दिनेछ । सबैभन्दा पहिला मान्छेहरुले ठगको परिभाषा के हो भनेर बुझन् आवश्यक छ । ठगी गर्ने मान्छे फेरी यही देशमा बसेर समस्या समाधान गर्छु भनेर लाग्दैन । यदि ठग्नु नै थियो भने मरो अमेरिकाको ग्रिन कार्ड एप्रुभ भएको थियो । म अमेरिका गएर बस्थेँ हुँला नी । धेरै ठगी गर्ने नेपाली अधिकांश विदेशमा लुकेर बसेका छन् कसैलाई ल्याउन सकेको छ ? पैसा भए जहाँ गए पनि बस्न पाइन्थ्यो । यो ठगको परिभाषा भित्र पर्दैन । मलाई जबरजस्ति ठग.. ठग.. भनिएको हो । कानुनमा पनि हामीलाई कारबाही गर्ने ऐन नभएपछि ठग भनेर फौजदारी मुद्दा लगायो ।
मान्छेको लागि पैसा भन्दा ठूलो जीन्दगी हो । जीन्दगीदेखि नै ठगिएको छु । समाजमा घृणित भएको छु । सम्पत्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै लुटेर खाएका छन् । बैंक, व्यक्ति सबै मलाई नै ठगिरहेका छन् । जति थियो बैंकले लिलामी गरेर खायो । मिनिमम भ्यालु गरेर लिलामी गरेर मलाई सिद्याइयो ।
धादिङमा गुण्डागर्दीः खुकुरी प्रहार गरि एकको हत्या, एक गम्भिर घाइते
बसन्त चौधरीको स्वामित्व रहेको पशुपति बिस्कुटमा आगलागी हल्ला मात्रै, १० करोड बिमा दाबी !
बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अध्यक्ष बस्नेतको ‘हर्कत’ : श्रीमतीको सरुवा रोक्न ‘जिएम’माथि हातपात !
मलेशियाको मर्डेका रंगशालामा हिमालयन गोल्ड कप: उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली विजयी